Maitiro ekukwirisa ISO - Nhungamiro: zvese nezve ISO mifananidzo muGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida shanda nemifananidzo yeIO Kubva pane yako yaunogovera kugovera, isu takagadzira iyi gwaro kwauri. Nayo iwe unozoziva zvese zvaunoda kuti utange kushanda nemhando idzi dzefaira nenzira yakapusa. Kunyanya kune avo vanobva kune mamwe masisitimu anoshanda seWindows, mavaive nehurongwa hwesoftware yekukwanisa kukwidza mhando iyi yemifananidzo kana kuapisa pama optical discs (maCD, maDVD, BD, ...), asi vane vakawana kuti akati zvirongwa hazviwanikwe paGNU / Linux.
Chokwadi ndechekuti ISO mifananidzo yakanaka kwazvo kushanda nayo uye chengetedza huwandu hweruzivo. Ndicho chikonzero nei vava iwo mafomati akasarudzika kune ruzhinji rwevatengesi ve software. Microsoft pachayo inokutendera kuti utore mifananidzo yeIO yemaitiro ayo azvino mashandiro, uyezve mawebhusaiti epamutemo emaprojekti e-distro anotenderawo mifananidzo yeIO kutorwa kubva kunzvimbo dzavanotora.
1 Chii chinonzi ISO?
2 Maitiro ekugadzira iyo ISO
3 Maitiro ekuisa ISO
4 Maitiro ekupisa ISO
Chii chinonzi ISO?
Iyo ISO chifananidzo faira rekuchengetedza chaiyo kopi yefaira system pasi peiyo ISO 9660 yakajairwa ndiani akamupa zita rake. Pamusoro pezvo, iri compact package, yavewo fomati yakanaka yekuchengetera zvirimo zvinotarisirwa kupiswa pamawidhi midhiya kana madhiraivhu anobviswa, pamwe nekugadzira makopi ekuchengetedza nemamwe mapurogiramu ekuchengetedza.
Kuwedzeredzwa inonyanya kuzivikanwa ndiyo .iso, asi ivo vanogona zvakare kuoneka pamwe ne .img yekuwedzera sezvinoonekwa mune mimwe mifananidzo yeanoshanda masisitimu eRaspberry Pi, nezvimwe. Uyu mutsauko pakureba hazvireve kuti iwo haasi mifananidzo yeiyo fomati, ingori musangano wakasiyana. Kunyangwe .iso iri inonyanya kufarirwa, isu tinogona zvakare kuwana akasiyana akapatsanurwa akadai se .cue uye .bin, ayo anochengeta iyo data (BIN) kune rumwe rutivi uye tsananguro yedata data (CUE) kune rimwe.
Izvo zvataurwa, zvakawanda software vagadziriBurning software kunyanya, vakaedza kugadzira yavo yemhando mafomati kuyedza kutsiva ISO, asi ivo vatadza zvechokwadi. Iyi ndiyo kesi yeNero Burning ROM Pamberi iyo yakagadzira iyo NRG fomati, kana Adaptec CIF yeiyo Rake CD Musiki, CCD yeiyo CloneCD chirongwa, MDF yeDoro 120%, nezvimwe.
Maitiro ekugadzira iyo ISO
Para gadzira ISO mifananidzo kubva kune yedu GNU / Linux distro Tine huwandu hwakawanda hwezvirongwa zvekuzviita, senge Furious ISO, ISO Master, Brasero, Rakajeka Kupisa, K3b, Acetone ISO, nezvimwe. Asi isu tiri kuzokudzidzisa iwe kuti uzviite nenzira ine simba uye pasina kutambisa zviwanikwa zvakawanda, uye izvi zvinoreva kuzviita kubva kunyaradzo neyakareruka ese-ane simba dd chishandiso icho iwe chaungave watove wakaisa mukugovera kwako, sezvo icho kazhinji inouya nekutadza ...
Fungidzira zvatinoda gadzira kopi yedhairekitori mukugovera kwedu, semuenzaniso iyo / imba / mushandisi yatinozoendesa kuIO. Kune izvi tinogona kuisa inotevera mirairo:
dd if=/home/usuario of=/home/imagenesiso/usuario_personal.iso
Imwe sarudzo ye "Isar" dhairekitori kushandisa chimwe chishandiso senge mkisofs:
mkisofs -o /home/usuario/imagen.iso /home/usuario/contenido
Pane kudaro, kana iwe uchida kugadzira iwo mufananidzo kurasa zvirimo muDVD kana CD, tinogona kushandisa iyi imwe nzira:
dd if=/dev/cdrom of=/home/usuario/imagen.iso
Nenzira iyi tinogona kugadzira mifananidzo yemadhairekitori uye nezvimwe zvekuchengetedza midhiya. Rangarira kuti iyo dd raira Iyo inotsigira chero chishandiso kana chekupinza svikiro kana iwe ukachinja nzira ye if =, nepo kwekuenda kwaunoda kuchengeta mufananidzo, iwe unongofanirwa kugadzirisa nzira ye =.
Maitiro ekuisa ISO
Nemamwe emapurogiramu ataurwa pamusoro apa tinogona gadzira ISO mifananidzo kuwana zvirimo graphically uye nyore. Zvakare, kune zvekare maturusi akaita semakisofs ayo atinogona kukwirisa yedu ISO mufananidzo mune chero dhairekitori kuti tikwanise kuwana izvo zvemukati tisinga fanirwe kuipisa pane inoonekera svikiro. Semuenzaniso, paWindows, pamwe chimbo chinonyanya kuzivikanwa cheiyi Doro 120% kana Daemon Zvishandiso, asi maturusi aya haawanike yeLinux. Saka manje? Zvakanaka, tinogona kugara tichidhonza mamwe maapplication akaita seFurious ISO kana AcetoneISO ayo ari nyore kushandisa graphical interfaces. Asi kana isu tichida kushandisa sarudzo idzo Linux inotipa natively:
sudo mount -t iso9660 -o loop /home/usuario/imagen.iso /media/iso
Sezvo isu tichiona, isu tinogadzira dhairekitori kwatiri kuenda kuzokwidza iyo ISO chifananidzo icho chatadaidza kuti iso uye isu takaisa mukati me / media dhairekitori. Ipapo isu tinoisa iyo ISO mufananidzo mune yakanzi dhairekitori uye tinokwanisa kuve nekwaniso yezviri mukati. Kana isu tisingachade zvakataurwa zvirimo, zvinogona kudzikiswa neumount sezvatinoona ... Nenzira, ne-- s Sarudzo yemakomo isu takaipa fomati iyo mune ino kesi iri ISO 9660 uye na -o isu iudze kuti ishandise chiuno chedu. Nezvo isu tiri kushandisa chaiyo kifaa chinonzi chiuno chiuno izvo zvichatibatsira kukwira iyo ISO mune chero dhairekitori, ichibvumira kupinda kune zvirimo.
Maitiro ekupisa ISO
Zvino, kana izvo zvatinoda zviri kupisa kana kupisa akati ISO mufananidzo kune optical mediaKunyangwe iri CD, DVD, HD-DVD kana BluRay, isu tinogona zvakare kusarudza iwo mapurogiramu ane graphical interface yatakataura pamusoro apa kana kunanga kuchikosheni uye kuzviita kuburikidza nemirairo. Kune mamwe maturusi mune echinyorwa modhi yeizvi, senge wodim, cdrskin, xorriso. Kana isu tatova navo vakaiswa, tinogona kuvashandisa nemirairo inotevera:
wodim -v dev=/dev/cdrom -dao /home/usuario/imagen.iso
cdrskin -v dev=/dev/cdrom -dao /home/usuario/imagen.iso
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrom -dao /home/usuario/imagen.iso
Nenzira, yeuka kuti mune dzimwe nguva iyo optical kifaa mukugovera kwako (kunyangwe isingawanzoitika) inogona kusadaidzwa / dev / cdrom, asi tora mamwe mazita senge / dev / dvdrom, kana / dev / sr0, Etc.
Ndinovimba zvave zvichikubatsira. Usakanganwe siya zvaunotaura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nongedzo: zvese nezve ISO mifananidzo muGNU / Linux
Kwete pane vamwe asi Ubuntu iri nyore sekukenya kwakaringana pane iyo ISO uye kukwidza, wozodzika. Nyora zvakafanana, vhura neX chirongwa, kurekodha uye voila. Ivo vanovhundutsira ma newbies
Kuwanda mukushandiswa kwenzvimbo dze graphical
Gnome CD Mudzidzisi
Yemahara ISO musiki
Furius ISO kukwira
Uye zvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuve, zvirinani, zvataurwa
chinyorwa chinoita kunge chakanyorwa kutyisidzira vangangove vashandisi ve linux
Pindura kune waldter
Hahaha ichokwadi, asi tarisa kuti nguva dzashanduka sei: kusvika makore angangoita mashanu apfuura rudzi urwu rwevadzidzisi raive chingwa chezuva nezuva uye pakati penharaunda imwechete, avo vasina kushambadza nenzira yakadaro vakashungurudzwa. Zvaive zvakajairika kuita kuti vanhu vatende kuti kuita zvinhu kubva kuchiteshi ndiyo nzira "yakapusa", uye zvechokwadi kune chero munhu anga ari programmer kana nyanzvi yepamusoro munyaya iyi, vangati hongu, asi kwatiri netsoka, zvaive zvisiri nyore.
Sekuremekedza kurudziro kuna Don Isaac, zvingave zvakanaka kwazvo kuti mune ramangwana zvinyorwa zvechikamu chino mushandisi akadzidziswa nenzira mbiri: neinogumira uye nemamiriro ekunze, kusarudza application. Ndatenda zvikuru neshure uye nekupa nguva yako kwatiri.
Symantec inogona kunge yakatyora rezenisi yeGNU GPL pane yayo Norton Core Router